DOWNLOAD VIDEOPAD VIDEO EDITOR - MMEMME NYOCHA - 2019
Taa, ndị mmepe na-enye ndị ọrụ ọtụtụ nghazi ngwọta vidio nke na-enye ohere maka nhazi ederede. Ihe omume ndị dị otú ahụ gụnyere VideoPad Video Editor, nke a ga-atụle n'isiokwu ahụ.
Videopad Video Editor bụ arụmọrụ vidiyo arụ ọrụ nke na-enye gị ohere ịmepụta vidiyo achọrọ.
Anyị na-akwado ịhụ: Mmemme ndị ọzọ maka edezi vidiyo
Otu n'ime ọrụ ndị bụ isi nke Videopad Video Editor bụ vimming video. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, nchịkọta akụkọ vidiyo na-enye gị ohere wepu mkpirisi na-enweghị isi na vidiyo ahụ.
Tinye egwu egwu
Gbanyụọ egwu ọdịyo mbụ, gbakwunye faịlụ egwu ndị ọzọ na vidio ahụ, gbanwee olu ha na ebe na ebe ndị dị mma nke vidiyo ahụ.
Iji mmeghari okwu
Chegharịa egwu egwu site n'itinye mmetụta dị egwu nye ha nke gụnyere Videopad Video Editor.
N'elu window window, onye ọrụ nwere ohere idekọ olu olu ma jiri ya na vidio edetu.
Iji mmegharị vidiyo
Ngwurugwu vidiyo dịgasị iche iche ga-agbanwe usoro ihe nkiri nke vidiyo na-abịa n'ihu.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ederede ọ bụla a ga - edeziri n'ọdịnihu nwere ike kpuchie na vidiyo: resize, font, ọnọdụ na vidiyo, yana nghọta ya.
Mepụta vidio 3D
Ihe vidiyo ọ bụla dị na kọmputa nwere ike ịghọ ihe nkiri 3D zuru ezu, iji lee nke ị ga-achọ iji nweta iko anya anaglyf.
Burn Blue-Ray na DVD
Enwere ike ịdekọ vidiyo ahụ a na-elegharị anya na kọnpụ anya.
Akwukwo na oru ndi mmadu
Enwere ike ịpụgharị vidiyo ahụ ọ bụghị nanị site na ịchekwa ya na kọmputa, kamakwa site na-ebipụta ya na ọrụ mmekọrịta ọha mmadụ ma ọ bụ igwe ojii.
Fidio vidio dịnụ mgbe ị na-arụ ọrụ na Videopad Video Editor nwere ike ịchekwa ya na usoro ọkpụkpọ ọ bụla ọzọ.
1. Ọnụ ọgụgụ dị oke maka atụmatụ nhazi zuru ezu;
2. Obere faịlụ ntinye;
3. Os na-agbanyeghị osọ, nke na-eme ka ọ dị mma ịrụ ọrụ na nchịkọta vidiyo na ngwaọrụ ndị na-adịghị ike;
4. Cross-platform (nchịkọta video dị maka ọtụtụ desktọọpụ na mobile os).
1. Enweghi nsụgharị n'efu (enwere oge ikpe 14);
2. Enweghị njikọ nke asụsụ Russian.
Nchịkọta vidio bụ mgbe ọ bụ usoro okike, ihe ịga nke ọma na-adabere n'ịdị na-enweta ngwá ọrụ dị elu na kọmputa. Videopad Video Editor - nke a bụ kpọmkwem nchịkọta akụkọ vidiyo nke ga-enye ohere ịghọta echiche ọ bụla.
Download mbipụta nke Videopad Video Editor
Otu esi eji VideoPad Video Editor Movavi Video Editor VSDC Free Video Editor AVS Video Editor
Videopad Video Editor bụ editọ vidiyo dị elu nke na-akwado ọtụtụ n'ime usoro ndị dị ugbu a. Ngwaahịa ahụ na-enye gị ohere weghara video site na igwe na kamera weebụ, na-arụ ọrụ na ndị vidiyo.
Atiya: Ndị editọ vidio maka Windows
Onye Mmepụta: NCH Software
Ọnụ: $ 21